Linux inogona kumhanya paMacs neM1 | Linux Vakapindwa muropa
Con Linux 5.15, iyo kernel yakagadziridza rutsigiro rweApple M1. Kuti uvandudze ndangariro zvishoma kune avo vasingayeuke kana kunge vasina chavanoziva, Tim Cook akaunza zvishoma kupfuura gore rapfuura processor yake yekutanga yemakomputa, imwe yavakadana kuti M1 uye ine zvivakwa zveARM. Nechikonzero ichocho, ivo vanogadzira vaifanirwa kushanda zvishoma kuti software yavo ienderane nechinhu chitsva chehardware cheapuro.
Izvo zvaisashanda paMacs matsva yaive Linux, uye kwete izvo chete, sezvo Windows yaive imwe sisitimu yekushandisa iyo yaisakwanisa kumhanyisa kunyangwe mumushini chaiwo. Asi nekufamba kwenguva rutsigiro rwuri kusvika, uye Linux ikozvino inogona kumhanyisa pamakomputa neM1 Apple… rudzi rwe. Inogona kushandiswa nenzira imwecheteyo yatinogona kumhanya neshanduro dzeApple pane Raspberry Pi: zvinoshanda, zvinhu zvinogona kuitwa, asi semuenzaniso hapana hardware yekumhanyisa.
Linux paM1 Macs inoshanda isina hardware kumhanyisa
Iyo purojekiti yanga ichishanda pairi kwemwedzi ndiAsahi Linux, uye vakatotaura nezve vavariro dzavo mumaemail anotumirwa pakati pevanogadzira kernel. Zvino, izwi rinoshandiswa kutsanangura mashandiro eLinux paMac neM1 "rinoshandiswa", zvinoreva kuti rinogona kushandiswa. Asi kwete kuti iyo yakakwana, sezvo iyo hapana kumhanyisa kuburikidza neGPU Izvo zvichaita, semuenzaniso, zvinoita kuti zvikone kuona mavhidhiyo kana kutamba mitambo yemavhidhiyo zvakanaka. Kana iri nyaya yemavhidhiyo, zvinongotarisa zvakanyanya.
Asahi Linux akakwanisa kuisa madhiraivha anodikanwa muLinux 5.16, Pakati payo pane PCIe, USB-C, Pinctrl, maneja wesimba kana iyo screen control:
“Nemadhiraivha aya, M1 Macs anonyanya kushandiswa seLinux desktop michina. Kunyangwe hazvo pasina kumhanyisa kweGPU parizvino, iyo M1's CPUs zvine simba zvekuti software-yakadzoserwa desktop iri kukurumidza pavari kupfuura, semuenzaniso, Hardware-inokasira Rockchip ARM64 michina. "
Dambudziko kana kunetsekana kuri kukurumidza kwehardware kushanda mukati Apple's SoC ichishandisa girandi yeGPU. Vagadziri vanofanirwa kugadzira mutyairi mutsva kubva pakutanga, uye izvo zvinotora nguva. Chinhu chinotevera chichava kuvhura chakakwana chinogadza, chimwe chinhu chinongowanikwa nenhengo dzemunharaunda panguva ino.
Zvinoenderana nevakagadziri vazhinji, uye ini ndinobvuma, ramangwana iARMSaka inhau dzakanaka kuti vagadziri ve software vari kushanda kunatsiridza rutsigiro. Kana zvikaenzaniswa, chimwe chinhu chatisingazive kuti chichaitika riini asi chichaitika, zvese zvinotsigirwa 100% uye tese tichakunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux ikozvino inogona kumhanyisa paMacs neM1, uye inoita kunge inogona kushandiswa